“Tena vitsy ny olona voan’io aretina io eto” hoy ny Pr Andriantseheno Marcellin - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsapa fa tsy dia nandrenesana akony loatra ny fanamarihana io andro io eto Madagasikara. Ny fahatsapana izany no nanatonana ny Pr Andriantseheno Marcellin izay “spécialiste des maladies neuropsychiatriques
“Miandalana io aretina io. Rehefa tsy mihetsika na au repos no misy ilay fangovitana no tena ahatsapana fa ao ny aretina. Mangovitra ho azy eo ny tanan’ilay marary ka ny ilany aloha no tratra avy eo mahazo ny tanany ilany indray. Mety ho tratra koa ny vavany. Rehefa mandeha ireny olona ireny rehefa elaela no nitondrany ny aretina dia lasa mivonkona ilay olona ary mikisaka izy rehefa mandeha antongotra. Henjana ilay hozatra” hoy ny Pr Andriantseheno Marcellin manazava azy. Tsisy anarana gasy hatramin’izao.
“Soritako fa tsy izay rehetra olona mangovitra dia tratry ny aretin’i Parkinson io, ohatra ny antsoina hoe tremblement familial, na rehefa handray zavatra dia mangovitra. Tsy maladie de Parkinson ireny” hoy ny Profesora nanao fanamarihana.
“Misy ny aretina azo avy amin’ny fihinana fanafody (neuroleptique na hafa) ka syndrome parkinsonien no filaza aza fa tsy maladie de Parkinson akory ireny” hoy izy nanohy ny fanazavany.
Araka ny nambaran’ny Profesora dia tena mbola vitsy no tratran’io aretina ion y mponina eto Madagasikara. Tsy mbola misy koa ny antontan’isa ahafahana milaza na firy isan-jaton’ny mponina no tratran’io aretina io na firy isan-jato.
Ny tsy fananana io antontan’isa io dia miteraka olana. Satria vitsy ny fanafarana ny fanafody ilain’ny marary. Tahaka ny mahazatra ny zavatra vitsy dia sarotra tadiavina no lafo. Ilay fanafody mihitsy no efa lafo ary vao mainka manano sarotra ny fitadidiana azy. Voatery mitady etsy sy eroa izay efa mihinana fanafody. Nomarihan’ny Profesora fa mandra-pahafaty ny marary iray no mihinana fanafody. Arakaraka ny fitombon’ny isan’ny taona nihinanana ny fanafody dia lefy ny herin’ilay fanafody efa nahazatra dia voatery mampitombo ny karazan’ny fanafody omena ny marary. Izany dia mitarika fahavoazana hafa toy ny hoe very tadidy ilay olona mihantitra ny atidohan’ilay marary.
Inona no mahatonga azy ?
Mbola vinavina no misy. Tsisy izany ny fiarovana azo hatao. Vitsy no azo lazaina fa manaranaka.
Manoloana izany dia nanambara ny Profesora andriantseheno fa tsisy afa-tsy ny manatona dokotera hatrany no hahafantarana ny tena mahazo ny olona iray sady efa sarotra no mijery ilay aretina no vitsy ny tranga mandalo eo anatrehan’ny dokotera iray miasa eto Madagasikara. Mampatsiahy ny fahasarotan’ny fitsaboana ny paludisme ho an’ny mpitsabo miasa any Eoropa ny tranga tahaka izao. Any Eoropa tokoa dia efa maro ny olona tratran’io aretin’i Parkinso ary ny nalaza tamin’ireny dia Mohamed aly na Cassius Clay.